iMac 2021 yemamiriyoni 1.299 euros, AirPods Max yemakumi mashanu nemakumi mashanu emadhora uye zvimwe zvinopihwa paAmazon eApple zvigadzirwa | IPhone nhau
Imwezve vhiki tinokuzivisa iwe nezve madhiri akanaka pane zvigadzirwa zveApple ayo anowanikwa paAmazon. Sezvo zuva rekuratidzira reiyo nyowani iPhone 13 renji iri kusvika, zvinoita sekunge Apple haifarire kubvisa stock iriko uye, zvakare, hatina kuwana chero kupi kwekuratidzira.
Kutenda kune chibvumirano pakati peApple neAmazon kutengesa zvigadzirwa zvavo zvakananga kuburikidza neyekupedzisira e-commerce chikuva, tenga zvigadzirwa zveApple nezvidimbu zvinonakidza Tiine vimbiso imwecheteyo senguva dzose, ichokwadi uye dzimwe nguva tinowana zvinopihwa zvatisingakwanise kupotsa.
Zvese zvipo zvatinokuratidza mune ino chinyorwa zvinowanikwa panguva yekuburitswa. Zvichida kuti nekufamba kwemazuva, izvo zvinopihwa hazvichawanikwe kana kuchawedzera mumutengo.
Amazon inotibvumira mari yekutenga zvigadzirwa zvese inowanikwa papuratifomu yayo nemutengo uri pakati pe75 ne3000 euros muzvikamu zviri nyore zvisina mubereko. Mashoko emari anowanikwa mune yega yega chinyorwa.
1 iMac 2021 yemamiriyoni 1.299
2 iPad Air 2020 kubva ku529 euros
3 IPad Zvishandiso
3.1 Yekutanga chizvarwa Apple Penzura yemakumi masere nemasere euros
3.2 Makaralı mbeva kwePadad kwema13 euros
4 3 months isina maAmazon Music HD
5 IPhone zvishongedzo
5.1 Yakazara MagSafe inoenderana nedehwe kesi ye iPhone 12/13 Pro Max ye97 euros
5.2 Apple MagSafe Kaviri Cheji ye130 euros
5.3 Yechipiri chizvarwa AirPods ye2 euros
5.4 Yechipiri chizvarwa AirPods isina waya yekuchaja kesi ye2 euros
5.5 AirPods Pro ye175 euros
5.6 AirPods Max ye509 euros
iMac 2021 yemamiriyoni 1.299
Kudzokororwa kwakamirirwa kwenguva refu kweMac renji kwakasvika pakutanga kwegore rino uye rakazviita nenzira hombe. Iyo iMac 2021 inotipa iyo a 24-inch screen ine 4.5K resolution ichiperekedzwa neApple M1 processor ino zvakare inowanikwa muiyo Pro Pro 2021 renji.
Iyi modhi inotipa maviri ekuwedzera mapoti, 8 GB ye RAM, 256 GB yekuchengetedza, 8 CPU cores uye 7 GPU cores. Mutengo wakajairika weiyo modhi mubhuruu ndeye 1.449 euros, zvisinei, isu tinogona tenga iyo paAmazon chete 1.299 euros, iyo inomiririra kuchengetedza kwe150 euros.
Tenga iMac 2021 ne8 CPU cores uye 7 GPU cores emamiriyoni 1.299
Iyo modhi ine 8 CPU cores uye 8 GPU cores, Iine mutengo wenguva dzose we1.669 euros, mutengo uyo Iyo yakaderedzwa kuita 1.399 euros paAmazon iine yakaenzana RAM uye hard drive chengetedzo.
Tenga iMac 2021 ne8 CPU cores uye 8 GPU cores emamiriyoni 1.399
iPad Air 2020 kubva ku529 euros
Kana iyo chizvarwa chitsva chePadad kana iPad mini isinga gadzirise zvaunoda, sarudzo yakanakisa nhasi, kana iwe ukapfuura kuburikidza nePro renji ndiyo iyo Mhepo yePadad. Iyo 2020 iPad Mhepo, ine 10,9-inch skrini uye 64GB yekuchengetedza, inowanikwa paAmazon kubva pa529 euros, iyo inomiririra kudzikiswa kwe18% pamutengo wayo wenguva dzose.
Mukati meiyo iPad Air 2020 isu tinowana iyo A14 Bionic processor, iyo chigunwe chigunwe sensor iri kumusoro, pane bhatani repamba, inowirirana neyechipiri chizvarwa Apple Penzura uye ine mutengo wenguva dzose muApple Chitoro che2 euros.
Pink iPad Mhepo ine 64 GB yekuchengetera makumi mashanu nemaviri euros. Sirivha iPad Mhepo ine 64 GB yekuchengetera makumi matanhatu nematanhatu euros. Denga rebhuruu iPad Mhepo ine 64 GB yekuchengetera 611 euros.
Yekutanga chizvarwa Apple Penzura yemakumi masere nemasere euros
Apple Penzura (2nd ...
Kana iwe uchida kuwana zvakanakisa kubva kune zvakasiyana-siyana izvo iyo IPenzura inotipa isu neiyo iPad Mhepo, unogona kuiwana ye 126 euros. Mutengo waro wenguva dzose muApple Chitoro ndeye 135 euros, haisi chakakosha dhisikaundi, asi mashoma ma euro atinogona kusevha haana kumbonyanya kuwanda.
Tenga 2st chizvarwa Apple Penzura yemakumi masere nemasere euros.
Makaralı mbeva kwePadad kwema13 euros
Makaralı Mouse, Mouse ...
Kana iwe usiri kuda kushandisa mari yakawanda pabluetooth mbeva inoshandawo nemabhatiri, kuAmazon isu tine INPHIC mbeva, mbeva iyo Iyo ine mutengo we12,99 eurosInoshanda neBluetooth uye tinokwanisa zvakare kuishandisa pakombuta sezvo ichisanganisira sensor yekubatanidza kune USB.
Tenga bluetooth mbeva ye12,99 euros.
3 months isina maAmazon Music HD
Pakutanga kwaNovember takakuzivisa nezve kusimudzira kunoitwa neAmazon kune vese vashandisi kunakidzwa neAmazon Music HD mahara zvachose, Apple inoyerera mimhanzi papuratifomu mune yakakwira tsananguro.
Ichi chinopihwa chinongowanikwa chete Kusvikira Gunyana 23nd sekureba sekunge iwe usati wawana kunakidzwa kwakapfuura kukwidziridzwa. Mushure memwedzi mitatu, mutengo uri 3 euros, iwo mutengo wakafanana neApple Music. Kana iwe uchida kubatira sevhisi uye rega kuzvinyoresa nguva yekubhadhara isati yatanga, unogona kuzviita kuburikidza Iyi link.
Yakazara MagSafe inoenderana nedehwe kesi ye iPhone 12/13 Pro Max ye97 euros
Apple Yakabatana ...
Kana iwe wakaneta nekutakura yako iPhone inongodzivirira kumashure uye iwe uchida kunakidzwa nezvinhu zvekuvaka zvinoshandiswa neApple pasina kuisa njodzi yekuzviwisira, Apple inotipa iyo inoenderana neyeganda kesi, chivharo chakaita sokisi (zvekuti tinonzwisisana) izvo zvinotibvumidza isu kutakura iyo iPhone 12/13 Pro Max nechengetedzo izere uye chengetedzo.
Es inoenderana ne MgSafe tekinoroji, saka hatidi kuibvisa kubva kumhosva kuti tiibhadharise. Uye zvakare, kusanganisa homwe yemukati diki yekuchengetedza kadhi rechikwereti, gwaro rekuzivisa pamwe netambo kuti ugare uine pariri. Kumberi, tine nzvimbo yekuona nguva kana kuti ndiani ari kutidana.
Mutengo wakajairika weiyi yakakosha yeganda kesi ndeye 149 euros, asi tinogona mutore iye paAmazon ye97 euros.
Tenga yakazara yeganda kesi ye iPhone 12/13 Pro Max.
Ichi chifukidziro chinowanikwa zvakare muvara rimwe chete, yepepuru yeiyo iPhone 12 uye iPhone 12 Pro ye 92 euros.
Tenga yakazara yeganda iPhone 12 uye iPhone 12 Pro kesi.
Apple MagSafe Kaviri Cheji ye130 euros
Apple Dual Chaja ...
Kana iwe uchitsvaga charger yekufambisa yeApple Watch uye iPhone 12, mhinduro iyo Apple inotipa isu ndiyo Double MagSafe charger, charger inopeta kudzikisa nzvimbo yainogara nekuitakura zviri nyore. Mutengo wakajairika wechaja iyi, iyo isingasanganisi iyo yemagetsi adapter, ndeye 149 euros, asi tinogona kuiwana kuAmazon kwema 130 euros chete.
Tenga Apple MagSafe Kaviri Cheji ye130 euros.
Yechipiri chizvarwa AirPods ye2 euros
Apple AirPods ine kesi ...
Iyo AirPods ichiri chimwe chezvigadzirwa zveApple izvo zvainotipa kukosha kwakanyanya kwemari paAmazon. Imwezve vhiki, tinogona kuwana yechipiri chizvarwa AirPods ine yekuchaja kesi ine mheni tambo mune yavo mutengo wakaderera: 105 euros. Mutengo wakajairika weaya mahedhifoni ndeye 179 euros.
Tenga 2nd chizvarwa AirPods ine mheni kesi ye105 euros.
Yechipiri chizvarwa AirPods isina waya yekuchaja kesi ye2 euros
Chechipiri-gen AirPods ine waya isina waya yekuchaja, futi vasvika pamutengo wavo wenguva-pfupi paAmazon uye tinogona kuvabata kwema 169 euros chete. Mutengo waro wenguva dzose muApple Chitoro ndeye 229 euros.
Tenga 2nd chizvarwa AirPods isina waya kesi ye169 euros.
AirPods Pro ye175 euros
Kunge hama dzavo diki, iyo AirPods Pro inowanikwawo kuAmazon, iine 37% dhisikaundi pamutengo wavo wenguva dzose we 279 euros. Yee 175 euros chete, tinogona kuwana iyo AirPods Pro kubva kuApple, ichitiponesa 104 euros pamusoro pemutengo wayo wenguva dzose muApple Chitoro.
Tenga AirPods Pro ye179 euros
AirPods Max ye509 euros
Nyowani Apple AirPods MAX -...
Apple's AirPods Max inowanikwawo kuAmazon ine inonakidza 19% dhisikaundi pamutengo wavo wenguva dzose we629 euros. PaAmazon anowanikwa, mune ese mavara e509 euros.
Kunyange zvazvo ichokwadi ichocho hausi mutengo waro wepasi wepasi, iyo yaive 499 euros mavhiki mashoma apfuura, iyo dhisikaundi inonakidza kwazvo uye kupihwa kwaunogona kupotsa uye iwe hauna kusvika kune yapfuura.
Tenga AirPods Max mune chero ruvara rwe509 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » iMac 2021 ye1.299 euros, AirPods Max ye509 euros uye zvimwe zvinopihwa paAmazon eApple zvigadzirwa.